Salohy Randriafanomezantsoa · Novambra 2020 · Global Voices teny Malagasy
Salohy Randriafanomezantsoa · Novambra, 2020
Nanomboka nandika tamin'ny 28 Aogositra 2016 · 265 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Salohy Randriafanomezantsoa tamin'ny Novambra, 2020
Vaovao farany Lingua volana Septambra 2020
Mediam-bahoaka27 Novambra 2020
Manolotra antsika ny vaovao Lingua volana Septambra 2020 ny mpitantana ny Lingua.
Vaovao farany Lingua volana Aogositra 2020
Mediam-bahoaka22 Novambra 2020
Manolotra antsika ny Lingua volana Aogositra 2020 ny mpitantana ny Lingua.
Vondrona mpianatra Maleziana miatrika fanadihadiana vokatry ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook nanentana ny mpanjaka tsy hitsabaka resaka politika
Azia Atsinanana17 Novambra 2020
"Tsy afaka miroborobo ao anatin'ny tontolon'ny sivana sy ny famerana ny fitenenana ary ny fanehoan-kevitra tsy mifandanja ny fandalinana akademika sy ny fampiroboroboana ny zon'olombelona."
Manao antso avo amin'ireo mpankafy azy mba hanome fanampiana hitsaboana ny fivontosana amin'ny atidohany ilay mpanakanto hip-hop Mozambikana Azagaia
Afrika Mainty17 Novambra 2020
Nahazo mpankafy noho ny fanoherany ireo mpitondra sy ny firesahany ny olana ara-tsosialy tamin'ny mozikany i Edson da Luz , fantatra amin'ny anarana hoe Azagaia.
Amerika Latina15 Novambra 2020
Niteraka resabe ny andiana dokambarotra nataon'ny orinasa mpanao kiraro avy any Goatemalà mampiseho vehivavy maty manao kiraro lamaody. Heverina ho tsy mety izany dokambarotra izany ao amin'ity firenena ity izay ahitana ny taha famonoam-behivavy avo. Manohitra izany ary manambara ny fanaovana ankivy an'ity orinasa mpanao kiraro ity ireo bilaogera Goatemalteka.
Afrika Mainty14 Novambra 2020
Ny alin'ny vovonana tany Paris hisian'ny filaminana tany Nizeria, niampita nankany Kamerona ny vondrona mitam-piadiana Nizeriana Boko Haram na dia teo aza ny fisian'ny mpitandro ny filaminana marobe.
Amerika Latina07 Novambra 2020
Niteraka fanehoan-kevitra avy hatrany tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Kolombiana ny vaovao avy amin'ny pretran'ny paroasy ao Jongovito, ao an-tanàndehiben'i San Juan de Pasto izay nandràra ny fankalazana ny fetiben'i San Pedro y San Pablo (natao ny 29 Jona).
Afrika Mainty05 Novambra 2020
Nanapa-kevitra ny hanatanteraka fetiben'ny jiro ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny hetsika #EndSARS ny zoma alina ho fanomezam-boninahitra ireo maherifo namoy ny ainy noho ny herisetra nataon'ny polisy.